पोखरामा पानको व्यापार फस्टाउँदै | Rajmarga
पोखरा । ‘पानको पात माया तिम्लाई सम्झन्छु दिनको रात ंं….!’ गीतको रचयिताले पानको पातसँग प्रेमको तुलना गरेर आफ्नो मायालाई गीतको माध्यमबाट वर्णन गर्न खोजेको छ ।
तराईका बजारमा पान पसल खोज्न भौँतारिनुपर्दैन । पोखरामा पान पसलको स्थल थाहा नभएको अवस्थामा भौँतारिनुपर्ने अवस्था छ । सप्तरी घर भई हाल पोखरामा व्यापार गर्दै आउनुभएका सत्यनारायण मण्डल दैनिक रुपमा पान खाने गरेको बताउनुहुन्छ । पोखरामा दैनिक रु एक लाखभन्दा बढीको पान बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ । दैनिक रुपमा एउटा पान पसलेले न्यूनतम ५० खिल्ली पान बिक्री गरेको अवस्थामा सो रकम बराबरको पान बिक्री भएको अनुमान गरिएको हो । प्रतिखिल्ली रु १५ देखि रु ६० सम्ममा पान बिक्री हुनेगरेको छ ।
पानका अर्का पारखी ललनकुमार झा पोखरामा पानको व्यवसाय राम्रो रहेको र आपूm दिनमा तीन–चार खिल्ली पान खाने गरेको बताउनुहुन्छ । सिर्जना चोकमा विगत बीस वर्षदेखि पानको व्यापार गर्दै आउनुभएका राकेश कुमार पानको व्यापारबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । “सबै दिन एकनासको बिक्री हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो । व्यापारबाट आपूm सन्तुष्ट भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । पानको व्यापारबाट राजश्वसमेत प्राप्त हुन्छ । वर्षेनी आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नगरपालिकालगायतमा रु १० हजारसम्म कर तिर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पोखरामा तीन थरीको पानको पातको व्यापार हुने गर्दछ । बङ्गलापता, मीठापता र पहेँलो रङ्गको पात । भारतको कोलकातालगायत ठाउँबाट वीरगञ्ज र भैरहवा भएर पानको पात पोखरा भित्रिने गर्दछ । थोक बिक्रेताले अधिकांश पसलमा पान पु¥याउने गर्छन् । पानका अन्य सामग्री कत्था र सुपारी नेपालकै हो । मीठा पानमा प्रयोग हुने सामग्रीका साथै जर्दा, चुना, पिलापतिलगायतका सामग्री भारतबाट आयात गरिन्छ । –प्रभाषचन्द्र झा /रासस
Previous post: विद्यार्थी कुट्ने प्रधानाध्यापकलाई म्याद थप
Next post: गोजीमा पानको पात राख्दा चम्कन्छ भाग्य ! यस्तो छ धार्मिक विधि !